သောသီခို: KNU နှင့် သဘောတူ ထားခြင်းကို အစိုးရ မလိုက်နာ
ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှာ တချိူ့ သောမျိူးချစ်တော်လှန်ရေးသမားတွေက ရန်သူကိုယုံကြည်မိလို့ငြိမ်းချမ်းရေးသူရဲကောင်းများ မဖြစ်ခဲ့ရပဲ သမိုင်းတရားခံဘ၀သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြရပါသည်။ မူးဆိုးကော်ကဆာ စောဟန်တာသာမွှေးခောတ်တုံးကပဲကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းရှင်းလေးတွေ့ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန် ထိုကာလက စောဟန်တာသာမွှေးတို့ ဟာ ကရင့်အမျိူးသားအတွက် မှန်တယ်ထင်လို့လုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေ တားမြစ်တဲ့ကြားထဲကတောင် လုပ်ခဲ့ကြတာပဲ။ ကရင်ပြည်နယ်ကြီးကိုတောင် ကော်သူးလေပြည်ကြီးလို့ ခေါ်ထွင့်ခဲ့ကြဘူးသေးတာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာဖြစ်လည်း.. ကရင်သမိုင်းမှာ စောဟန်တာမွှေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးသူရဲကောင်းမဖြစ်ခဲ့ပဲ သမိုင်းတရားခံဖြစ်ခဲ့သွားတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိ။ စောဟန်တာသာမွှေးခောတ်တုန်းကနိုင်ငံရေးအမှားဟာ ပြန်လည်ပြီး အဖတ်ဆယ်လို့ ရကြသေးတယ်။ ယနေ့ ကေအဲန်ယူအခြေအနေနဲ့ လက်ရှိပွဲက ပွဲကြီးပွဲကောင်း နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်း အနေအထားလို့ တောင်ပြောလို့ ရတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရေးပါတဲ့ရာထူးတွေကိုင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကအစ တက်တက်ကြွကြွ။ ဤအခြေအနေမျိူးမှာ မမှားနဲ့မှားရင်ဘယ်သောအခါမှ ပြန်၍အဖတ်ဆယ်လို့ မရတော့တဲ့အနေအထား... အခုအချိန်မှာ CODE OF CONDUCTS အကြောင်းလည်း ဘယ်သူမှ လေးလေးနက်နက် ပြောဆိုသံလည်းမကြားရပါ။ ကျနော်တို့ ချစ်သော KNU ဦးဆောင်သော ကရင့်တော်လှန်ရေးကြီးနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ သမိုင်းတရားခံဖြစ်မည့်အဖြစ်မျိူးမှ လွတ်ကင်းကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း။
Written by အဲာပို
KNU ၏ သမ္မတ တွေ့ဆုံရေး ခရီးစဉ် အတွင်း ကရင့် အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် မူတူးစေးဖိုးနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့အား လက်ချင်းယှက် တွေ့ရစဉ်(ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်)
Posted by PKD at 1:50 AM
မြန်မာပြည်တွင်းစစ်က ငြိမ်းချမ်းဖို့သင့်နေတာကြာပါပြီ...ဘာကြောင့်မငြိမ်းချမ်းသေးတာလဲ...စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ..စစ်မှန်တဲ့..စေတနာအရင်းခံရှိဖိူ့လိုတယ်..အဲဒီ..စစ်မှန်တဲ့..စေတနာဆိုတာ..လက်ရှိ..စစ်အစိုးရနဲ့...ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့.စီးကမ်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို..သွားနေပါတယ်ဆိ်ုတဲ့..အာဏာရပါတီ..အစိုးရရယ်...ခေတ်မှီတဲ့တပ်မတော်နဲ့..ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး..ဒီမိုကရေစီအစိုးရမှာ..မရှိမဖြစ်တဲ့..ကာကွယ်ရေးနဲ့..လုံခြုံရေးကန္တမှာ..စစ်တပ်ကအရေးပါတဲ့နေရာကနေ..တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမယ်လို့ ပြော.ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေ..KNU/KIO/SSA အစရှိတဲ့ လက်နှက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာ...ကြောင်တကောင်က..ကြွက်တကောင်လိုကစားနေသမျှကာလပတ်လုံး...ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ...မုံလုံးကို စက္ကူကပ်...ပါတ်ချာလယ်..ရပ်လိုက်..ပြစ်လိုက်..ပြက်လိုက်.. .ပြန်တိုက်လိုက်နဲ့....ကြွက်သေခါနီးလျှော့ပေးလိုက်...ပြန်ထလာယင် ပြန်ဖိလိုက်နဲ့....ပြီးနိုင်ပါတော့မလား...အဲဒီထဲမှာ..ချမ်းသာအောင်..အမြတ်ထုတ်သွားမဲ့သူတွေ..တန်းစီနေတာနော်...မေးခွန်းတခုပဲမေးမယ်..တကမ္ဘာလုံးသိနေတဲ့...အပြစ်ရပ်ဒေသတွေမှာ..တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာ..စစ်အစိုးရဖက်က..တပ်တိုးချဲ့နေတာ..ဘာသဘောလဲ...စဉ်စားကြပါ...ခေါင်းသုံးကြပါ....
Does it mean they lied to KNU? But I think the KNU leaders will never break this cease fire even they were lied by Burmese government. Coz "MONEY IS SECOND GOD."
"NO ONE WILL WANT TO HOLD THE ARM IF THEY ARE RICH" This may be true for KNU leaders.
soe pyae said...
. ပြောချင်တာ.သတိထားကြအုံး စဉ်စားပါ အစိုးရ ခြေလမ်းစောင်းကြည့်ကြ ခေါင်းဆောင်အလုံးတွေ ရဲဘော်တွေက လက်နက်ပြင်ဆင်ထား ညီညွတ်ကြပါ.